राजसंस्था फ्याँक्न मदन नमान्दा प्रचण्ड बनेका थिए भारतीय तुरुप | Citizen Post News
राजसंस्था फ्याँक्न मदन नमान्दा प्रचण्ड बनेका थिए भारतीय तुरुप
२०७५ चैत्र २६ गते ०८:१६
झापा आन्दोलनबाट उदाएका नेता राधाकृष्ण मैनालीले भारतको त्यस्तो मनसायका प्रस्ताव तत्कालिन माक्र्सवादी लेलिनवादी (माले) को केन्द्रीय कमिटिमा माधवकुमार नेपालमार्फत पुराएको दाबी गरेका छन् । जुन प्रस्तावलाई तत्कालिन माले महासचिव मदन भण्डारीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।नेपालमा जिउँदो कार्ल माक्र्सको संज्ञा पाएका भण्डारीमार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फराकिलो बनाएर आफूअनुकुलतामा निर्णय गराउने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेका थिए ।
तर, भण्डारीले सोही संकेत पाएका आधारमा राजसंस्था कायम राखेरै भए पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र वर्गमुक्ति कायम गराउने अभियान गरेका थिए । त्यसैले भण्डारीले गरेका कतिपय भाषणमा पनि ‘राजाले जनताको अधिकार नचलाउने भए उक्त संस्था राख्न सकिने तर दलाल सामन्तवाद र सर्वसत्तावादीका अंश अनेक प्रकारमा रह्यो भने खतरा हुने’ बताएका थिए ।
जनयुद्धका बेला तत्कालिन माओवादीका हाइप्रोफाइल नेताले भारतमा आश्रय पाउनु मुख्य कारण यहि बनेको राजनीतिक जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन् । त्यसो त नेपालमा राजसंस्था हटाउने सन्दर्भको आवाज त्यसबेलैदेखि माओवादीभित्र पनि डा. बाबुराम भट्टराईले उठाएका थिए । तर, उनलाई विस्तारवादीको ट्याग भिराएर प्रचण्डले कारबाही पनि गरेका थिए । त्यसबेलासम्म प्रचण्डलाई भारतीय कुटनीतिक अधिकारीले सम्पर्क बढाएका थिएनन् । प्रचण्ड मूलधारको सत्तामा आउनका लागि निरन्तर दरबारसँगको सम्पर्कमा रहँदा बाबुराम भट्टराई भने भारतीय सम्पर्कमा थिए ।
सोही अन्तरविरोधबीच माओवादीभित्र ठूलो हलचल मच्चिएको थियो । माओवादी जनयुद्ध भारतविरोधी कित्तामा रहेका कारण बाबुरामलाई बन्दी बनाउने प्रचण्डको निर्णयमा अन्य सदस्यको सहमति रहेको थियो । तर उक्त प्रकरणबाट रिसाएका भारतीय कुटनीतिज्ञले हतियार रोक्ने र भारतमा रहेका माओवादीका सबै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरी सरकारलाई बुझाउने धम्की दिएपछि प्रचण्ड हच्किएका पूर्वमाओवादी नेताहरूले बताएका छन् ।
त्यसपछि भारतले प्रचण्डलाई नै आफ्नो नेपाल कार्ड बनाउने खेलमा बोलाएको खुलासा हुन थालेका छन् । नेपालमा दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसहित सबै परिवारको हत्या भएपछि राजनीति फरक ‘डिस्कोर्स’मा पुगेपछि तुहिनसक्ने माओवादी जनयुद्धलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रचण्ड भारतसँग हात मिलाउन राजी भए । त्यसैपछि माओवादीले राजसंस्था हटाउने एजेन्डा बैठकहरूमा छिराएर सर्कुलर जारी गर्न थालेको थियो ।
१२ बुँदेको चाँजोपाँजो र भारतीय सुरक्षाकर्मी विमानस्थलमा राख्ने प्रस्ताव:
सोही बीचमा माओवादीको दुई लाइन संघर्षमा यताउता खेलीरहेका प्रचण्डले विस्तारवादी कित्ताको विरोध छाडेर डा। बाबुराम भट्टराईसँग मिल्ने निर्णय गरे । यसपछि माओवादीभित्र हार्डलाइनर कित्ताले कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सोही शिलशीलामा चुङवाङ बैठकसम्म पुग्दा डा. भट्टराईलाई स्थायी कमिटीमा फर्काएर हार्डलाइनर मानिने रामबहादुर थापा बादललाई कारबाहीको प्रस्ताव भएको थियो । जसको विषयमा बादलले दिएको स्पष्टोक्तिको भिडियो प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ भने प्रचण्डको रणनीतिक भाषण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसमा बादलले भनेका छन्,‘के म लिनप्याओ हो त ?’ उनले उक्त भाषणमा मगर हुनु र ब्राम्हण हुनुको चेतको फरक आँकलनको उदाहरण दिँदै आत्मआलोचनाका हिसाबले पनि प्रस्तुती गरेका छन् । दरबार हत्याकाण्डपछि रिसाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घोषणा गरी सडकमा जाने निधो गरेका बेला भारतीय प्रशासनले राजा फ्याँक्ने सही मौका छोेप्यो । सोही बेला उसले मध्यस्तता गरी १२ बुँदे समझदारी नयाँ दिल्लीमा भयो ।
जबकि, उक्त समझदारीको विरोध गर्ने वा हुन नदिने तत्कालिन माओवादीका नेताद्वय मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई जेलमा राखेको थियो । समझदारी भएपछि उनीहरूलाई छाडिएको थियो । भारतकै प्रस्तावका आधारमा शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई तत्कालिन पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पार्टी रहेको एमाले सरहको सांसद संख्या दिइएको थियो । अलोकतान्त्रिक हिसाबले निर्वाचित नगरी माओवादीलाई त्यसरी संसदमा ल्याउनुको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न गरिएको थियो ।
त्यसैबेला राजसंस्था फ्याँक्ने घोषणा भएको थियो । तर, त्यसको अनुमोदन भने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले गर्ने भनियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ राजसंस्था सदाका लागि फ्याँक्ने विदेशी एजेन्डा कार्यान्वयनमा आएको राजावादीहरू बताउँछन् । उक्त विषय अवैधानिक हिसाबले निर्णयमा पुराइएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पटक-पटक भनेका थिए ।
फेरिएको भारत कुटनीतिको प्रभाव:
उक्त राजनीतिक परिवर्तन भारतीय प्रशासनमा गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइशीश विङ्सको रिपोर्टका आधारमा भइरहेको थियो । तर, २०१४ मा भारतीय राजनीतिमा अनौठो परिवर्तन आएपछि त्यहाँका विभिन्न संस्थामा देखिएका परिवर्तन र प्रभावकारीताका कारण नेपालको राजनीति पनि प्रभावमा परेको थियो । भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक बहुमतमा आउनुका साथै प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी आएपछि 'रअ' लाई कमजोर र आइबीलाई सक्रिय बनाए ।
राजनीतिक तहमा नै कुटनीतिक सम्बन्धका निर्णय गर्न थालिएपछि नेपालमा सुस्ताएको राजसंस्थाको आन्दोलनले बल पुरायो । आज प्रकाशित जनप्रहार साप्ताहिक लेख्छ, 'राजसंस्था मोदी प्रशासनको प्रधान एजेन्डा नभए पनि नेपालका अभियन्ताले हिन्दु धर्मको मुद्दासँग राजसंस्थालाई झुन्डाएर अघि बढाए । जसको बिम्बका रूपमा भारतीय प्रशासनले स्वीकार गरेको थियो र, उसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई उच्च तहको सम्मान र स्वागत गरिरहेको छ ।' उता राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने खेल लोकप्रिय राजा विरेन्द्रको बंशनाससँगै सुरु भएको थियो ।